Spocket: Alefaso ary ampidiro am-pahamendrehana ny orinasa Dropshipping miaraka amin'ny sehatra e-varotrao | Martech Zone
Amin'ny maha-mpamoaka votoaty anao dia zava-dehibe tokoa ny fampivoarana ny fidiram-bola. Tany izay nanananay fampahalalam-baovao lehibe vitsivitsy roapolo taona lasa izay ary nahazoam-bola ny dokam-barotra, ankehitriny dia manana fampahalalam-baovao sy mpamokatra votoaty an'arivony izahay na aiza na aiza. Tsy isalasalana fa efa nahita mpamoaka lahatsoratra mifototra amin'ny dokam-barotra tsy maintsy nanapaka mpiasa nandritra ny taona maro ianao… Ireo dia mety ho fanohanana ara-bola, fanoratana boky, fanaovana kabary, fanaovana atrikasa karamaina, ary fampianarana fampianarana.
Ny renirano iray tsy hita maso dia manomboka fivarotana an-tserasera miaraka amin'ireo vokatra mifandraika. Ny fananana podcast, ohatra, izay miala dia azo tohanana amin'ny satroka, t-shirt, ary entana hafa. Na izany aza, ny fikarakarana ny fitahirizana, ny famonosana ary ny fandefasana dia aretin'andoha izay mety tsy manam-potoana hanaovanao izany. Eo no vahaolana tonga lafatra ny dropshipping.
Inona no atao hoe dropshipping ary ahoana ny fiasan'izy io?
Ny mpanjifa dia mametraka baiko ao amin'ny fivarotanao ary mandoa anao ny vola X. Ny mpivarotra (ianao) dia mila mividy an'io vokatra io amin'ny vola Y amin'ny mpamatsy, ary halefany mivantana amin'ny mpanjifanao ilay entana. Ny tombony anananao dia mitovy amin'ny = X - Y. Ny maodely dropshipping dia ahafahanao manokatra fivarotana an-tserasera tsy mila mitondra tahiry mihitsy.
Spocket: Mitadiava vokatra lafo indrindra avy amin'ny mpamatsy azo itokisana
efa izahay voasoratra about Pirinty, mpamatsy dropshipping taloha, izay tena manjaka amin'ny tsena. Printful dia manolotra fahafahana manamboatra sy mamoaka vahaolana marika na novolavolaina. Spocket hafa noho ny tsy fanananao marika na fahaiza-manao fanamboarana… tsenan'ny vokatra voaporofo fa efa mivarotra tsara.
Spocket miavaka satria tsy mpamatsy iray ihany… angona an'arivony vokatra mivarotra lafo indrindra avy amin'ny mpamatsy azo itokisana sy kalitao. Manana vokatra mitambatra avy any Etazonia, EU ary maneran-tany izy ireo, ka ho afaka hanintona tsena maro ianao – manerana izao tontolo izao.
Ny tsenan'izy ireo dia ahafahanao mikaroka sy mandamina araka ny loharanon'ny fandefasana, ny hafainganam-pandehan'ny fandefasana, ny fandefasana mora, ny fanisana, ny vidiny, ny maha-zava-dehibe ary ny sokajy:
Anisan'ny sokajy malaza ny fitafian'ny vehivavy, firavaka sy famantaranandro, kojakoja ho an'ny biby fiompy, kojakoja fandroana sy hatsaran-tarehy, kojakoja teknolojia, kojakoja an-trano sy zaridaina, kojakoja ankizy sy zazakely, kilalao, kiraro, kojakoja fety, sy ny maro hafa. Anisan'izany ny:
santionany: Kaomandy avy hatrany amin'ny dashboard ao anatin'ny kitika vitsivitsy. Andramo mora foana ny vokatra sy ny mpamatsy hanorina orinasa dropshipping azo antoka.
Fandefasana haingana: 90% ny mpamatsy Spcoket dia any Etazonia sy Eoropa.
Mahazoa tombony ara-pahasalamana: Manome anao fihenam-bidy 30% - 60% amin'ny vidin'ny varotra mahazatra ny Spocket.
Fikarakarana kaomandy mandeha ho azy 100%.: Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny manindry ny bokotra fandefasana, ary izy ireo no mikarakara ny ambiny. Mikarakara ny baiko izy ireo ary mandefa izany amin'ny mpanjifanao.
Faktiora marika: Ny ankamaroan'ny mpamatsy ao amin'ny Spocket dia mamela anao hampiditra ny famantaranao manokana sy ny naoty namboarinao amin'ny faktioran'ny mpanjifanao.
24 / 7 Support: Afaka mandefa hafatra amin'ny fotoana rehetra ianao, ary vonona hamaly ny fanontanianao izahay.
Spocket koa dia manana iray amin'ireo vondrom-piarahamonina dropshippers lehibe indrindra hianarana Facebook!
Spocket dia manolotra fampidirana mirindra amin'ny BigCommerce, Shopify, Felex, Wix, Ecwid, Squarespace, WooCommerce, Square, Alibaba, AliScraper, ary fivarotana KMO.
Manomboka amin'ny Spocket
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Spocket ary mampiasa rohy miasa ao amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: AlibabaAliScraperBigCommercefampidirana dropshippingfivarotam-bokatrampamatsy dropshippingEcwidFacebook groupFelexentam-barotrafivarotana an-tseraserashopifykianjasquarespacempamatsyWixwoocommerce